ဒီဂျစ်တယ်သတင်းသတင်းထောက် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းသတင်းထောက်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားလာအိမ်ခြံမြေ-အာရုံစူးစိုက်သတင်းအိမ်ခြံမြေ join ဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းသတင်းထောက်ကိုရှာဖွေနေပါတယ်။ သင်, သုတေသနပြုရေးသားခြင်းနှင့်အဓိကအနောက်ကမ်းခြေစျေးကွက်များတွင်အိမ်ခြံမြေအကြောင်းကိုဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာမြှင့်တင်အားဖြင့် US မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းအမှတ်တံဆိပ်တိုးချဲ့အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကစားပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းရင်းမြစ်များ၏ကွန်ယက်စျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းပေါ်သတင်းပို့, စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်များတက်ရောက်ခြင်းနှင့်သင့်အလုပ်မြှင့်တင်ရန် tools တွေကိုတစ်အကွာအဝေးပြုကြရန်တွန်းအားပေးပါလိမ့်မယ်အဖြစ်စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးရောစပ်ရပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်ကြောင့် BuzzBuzzHome မှာအလုပ်လုပ်?
BuzzBuzzHome အသစ်ကဆောက်လုပ်ရေးအိမ်မှာစျေးဝယ်များအတွက်မြောက်အမေရိကရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး site ကိုဖြစ်ပါတယ်။ BuzzBuzzHome developer များနှင့်တိုက်ရိုက်စားသုံးသူချိတ်ဆက်နှင့်စားသုံးသူ, စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အိမ်ခြံမြေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအကြားပူးပေါင်းများအတွက်လူမှုရေးပလက်ဖောင်းပေးပါသည်။ ကျနော်တို့အင်ဂျင်နီယာများ, ဒီဇိုင်နာများ, ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာ, သတင်းသတင်းထောက်တွေကိုနှင့်လေ့လာသုံးသပ်သူများကတစ်တောက်တောက်နဲ့စိတ်အားထက်သန်အဖွဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်, ပွေးညီ-အစာရှောင်ခြင်းခေတ်ရဲ့သွက်လက်နှင့်ပျော်စရာပါပဲ။ ကျနော်တို့ခက်ခဲပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရေးနှင့်၎င်းတို့၏အလုပ်၏တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုကိုမြင်လျှင်အကြောင်းကိုစိတ်အားထက်သန်နေသော, အသည်းအသန်အသိဉာဏ်နှင့်မောင်းနှင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုရှာပါ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းသတင်းထောက်အခန်းကဏ္ဍဟာဝေးလံခေါင်သီအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်ထားသည့် LA ကကောင်တီဧရိယာတွင်အခြေစိုက်ထားရမည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏နယူးယောက်နှင့်တိုရွန်တိုရုံးများအတွက်အကြီးတန်းမန်နေဂျာမှအစီရင်ခံပါလိမ့်မယ်။
ကွင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့် LA က, San Francisco Bay Area နှင့်ဆီယက်တဲလ်အပါအဝင်အဓိကအနောက်ကမ်းခြေစျေးကွက်အပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူ, အိမ်ခြံမြေသတင်းခေါင်းစဉ်အပေါ်သတင်းပို့။
အနောက်တိုင်း US မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကနေအိမ်ဆောက်ကြော်ငြာမိတ်ဖက်များအတွက်ထုံးစံအယ်ဒီတာအဖွဲ့အကြောင်းအရာဖန်တီးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကအတူပူးပေါင်း။
သင်တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စာရေးဆရာပါပဲ။ သင်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများဖော်ထုတ်ရန်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အနှစ်ချုပ်ရန်နှင့်အစာရှောင်ခြင်းထုတ်ဝေနေတဲ့အရည်အသွေးမြင့်မားဇာတ်လမ်းကိုရရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သငျသညျလေးနက်အရေးအသားခုတ်အပိုင်ကသက်သေပြရန်အတွက်နမူနာရှိသည်။
သင်တစ်ဦးပုံပြင်လုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်နှိပ်စေသည်ဘယ်အရာကိုရယူပါ။ သငျသညျသတင်းစာပညာတစ်ဒီဂရီများရှိပါသလား? ဂရိတ်! မရလျှင်, ငါတို့သည်နေဆဲနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တို့သည်ငါတို့၏စာဖတ်သူများမျှဝေချင်လိမ့်မည်ဟုပုံပြင်များကိုရေးသားနိုင်ပါတယ်သကဲ့သို့သင်တို့ထံမှနားထောငျခငျြတယျ။
သင်တစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျောပွထားသဆွစ်ဇာလန်ကြည်းတပ်ဓားပါပဲ။ တစ်ဦးအပြန်အလှန်ဂရပ်ဖစ်အတွက်ဒေတာပြုစုနေတဲ့ Facebook ကတိုက်ရိုက်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ကင်မရာပေါ်တွင်ပေါ်ထွန်းဖို့ - သင်အယ်ဒီတာအဖွဲ့တာဝန်များကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအစုံပေါ်ယူပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
ဝန်ထမ်းစတော့ရှယ်ယာ option ကိုအစီအစဉ်
လျှောက်ထားစိတ်ဝင်စားပါသလား? သငျသညျ BuzzBuzzHome မှာဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းသတင်းထောက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်မရရှိနိုင်လျှင်, သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုချွတ်ပြသသော 2-3 အရေးအသားနမူနာတလျှောက်ပို့ချင်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဝေမျှမယ်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူအရေးအသားနမူနာပါဝင်သည်ပေးပါ။
ဆိုးကျိုးများအပြီး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အသံလွှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းသတင်းထောက် photoshop ထုတ်လုပ်မှု ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း 2017-11-30